Wararka Maanta: Sabti, Sept 4 , 2021-Maamulka Galmudug oo ka hadlay ciiddamada Puntland ee tagay koonfurta Mudug
Labadii maalmood ee ugu dambeysay ayaa warbaahinta lagu arkayay ciidamadan oo watay dabaabaadka dagaalka, kuwaas oo isku diyaariyay in ay Galmudug ka caawiyaan dagaalka Alshabaab.
Wasiir ku xigeenka amniga maamulka Galmudug Cabdulahi Cabdisalan, ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ay iyaga maamulka Puntland ka dalbadeen in ay ka caawiyaan dagaalka ay kula jiraan Alshabaab.
"Maadaama Puntland, ay khibrad u leedahay la -dagaallanka Alshabaab, waxaan ka codsannay inay naga caawiyaan sidii aan Al -shabaab uga saari lahayn dhulka ay naga haystaan," ayuu yiri Wasiir ku -xigeenka Amniga Galmudug, Cabdulahi Cabdisalaan.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare, ayaa maalmo ka hor sheegay inay Galmudug u direen ciidamo khibrad u leh la -dagaallanka Al –shabaab.
"Waxaan u dirnay Galmudug ciidamo yaqaan sida loola dagaallamo Al -shabaab, waana isbahaysi lagu ciribtirayo Alshabaab," ayuu yiri guddoomiye Yare oo ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidamada loo diray.
Al Shabaab ayaa dhawaan dib ula wareegay magaalada Camaara oo ah magaalo istiraatiiji ah oo ku taal waddada aadeysa magaalo -xeebeedka Xarardheere, oo ah goob ay al -Shabaab aad ugu xooggan tahay.
Alshabaab waxay sidoo kale sheegeen in ay ku sugan yihiin degmada Bacaadweyne iyo Shabeellow oo ah dhulkii horay looga saaray, balse ay makii dambe isagoo baxeen.